आफ्नै आमालाई भगाउनेलाई छोराले पनि सम्झाएको कुरा बाहीरियो, छोराले सम्झाउँदा छोरालाई उल्टै यसो भन्दा रहेछन् (भिडियोसहित) – live 60media
आफ्नै आमालाई भगाउनेलाई छोराले पनि सम्झाएको कुरा बाहीरियो, छोराले सम्झाउँदा छोरालाई उल्टै यसो भन्दा रहेछन् (भिडियोसहित)
चितवन । केही दिन अघि चितवनमा एक २२ वर्षीय युवकले छिमेकीकै श्रीमती भगाएको समाचार हामीले केही समय अघि मात्रै सम्प्रेषण गरेका थियौं । जस्मा २२ वर्षीय युवकले ३२ वर्षीय ३ सन्तानकी आमालाई भगाएको कुरा थियो । श्रीमान र छोराछोरी छाडेर भागेकी तीनै महिलाको जेठो छोराले आमाको बारेमा धेरै कुरा बोलेका छन् ।
आफ्नो मुटुभन्दा प्यारो सन्तान र रातदिन मज्दुर गरेर खान दिएको श्रीमानलाई छोडेर जाने ती महिला जयनारायण चौधरीकी श्रीमती सीता कुमारी चौधरी हुन् । अर्कैकी श्रीमती र तीन तीन ओटा बच्चाको आमालाई भगाउने ती युवक धन बहादुर थापा हुन् । उनी अविबाहीत युवक थिए ।
तीनै धन बहादुरलाई सीताको जेठो छोराले आफ्नी आमासंग संगसंगै नहिंड्न र नलाग्न भनेका रहेछन् । सीताका जेठो छोरा भन्छन्,‘जता गएपनि संगसंगै जान्थे । संगसंगै आउँथे । एउटा घरबाट निस्किएपछि अर्को पनि निस्किन्थे । मैले हाम्रो आमासंग धेरै संगत नगर्नु । आफ्नो बाटो आफै हिंड्नु भन्दा मलाई दुटैले सानो भएर हामलार्इी सिकाउँछस् ? भन्दै उल्टै गाली गर्थे ।’ उमेरमा झण्डै एक दशक जेठी सीताले आफ्नो सबै कुरा छाडेर छिमेकीकै अविबाहीत छोरासंग भागिदिएपछि यतिबेला सीताको र धन बहादुरको परिवार तनावमा छ । भिडियो
← वर्षभरि नै फरक-फरक रानीसँग रात बिताउँथे यी राजा !
दीपेन्द्रसँग विवाह नजुरेपछि अविवाहित बसेकी सुप्रिया शाहको जर्नेलसँग भयो विवाह, २० वर्षपछि बल्ल उनले बिवाह गरिन ! →